AC Milan Oo Ku Biirtay Tartanka Loogu Jiro Romelu Lukaku
HomeWararka CiyaarahaAC Milan oo ku biirtay tartanka loogu jiro Romelu Lukaku
April 22, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
AC Milan ayaa kusoo biirtay tartanka loogu jiro weeraryahanka Chelsea iyo Belgium ee Romelu Lukaku.
28-sano jirkaan ayaa ku dhibtoonayay gool dhalinta tan iyo markii uu Stamford Bridge kaga soo laabtay Inter Milan aduun dhan 97.5 milyan ginni xagaagii hore, kaliya shan gool ayuu dhaliyay 21 kulan oo Premier League ah ilaa maanta.
Kadib markii uu waraysi uu bixiyay dhamaadkii sanadkii hore daaha ka qaaday in aanu ku faraxsanayn xaalada uu ku sugan yahay Chelsea, Lukaku ayaa sidoo kale ku dhibtoonayay waqti uu kula ciyaaro kooxda difaacanaysa Champions Leaque-ga, taas oo qayb ka qaadatay wararka sheegaya in kooxdu ay isku daydo inay yarayso khasaaraha soo gaadhay. weeraryahanka xagaaga.
Kooxdiisa hore Inter ayaa si weyn loola xiriirinayay u dhaqaaqista Belgian, laakiin sida laga soo xigtay Goal , kooxda ay isku magaalada yihiin ee AC Milan ayaa haatan loo arkaa inay xiiseyneyso inay dib ugu soo celiso Italy.
Si kastaba ha ahaatee, warbixintu waxay intaa ku dartay in dalabaadka macquulka ah ee qiimaha suuqa kala iibsiga ee Chelsea, iyo sidoo kale dalabaadka mushaharka ciyaartoygu, ay caqabad weyn ku noqon doonaan heshiis kasta oo heerkan ah.